google inopa mwedzi mina yemahara youtube tsvuku uye google kutamba mimhanzi sevhisi
Kuru Nhau & Ongororo Dhiri: Tora mwedzi mina yemahara Google Play Music uye YouTube Red sevhisi
Dhiri: Tora mwedzi mina yemahara Google Play Music uye YouTube Red sevhisi
Google yadzoka nechimwe chibvumirano chinotyisa pamasevhisi ayo ekuparadzira - YouTube Red uye Google Play Music. Kana iwe & apos; uri mushandisi we Android ipapo iwe & apos; zvimwe wakazviona izvo madhiri aya akajairika uye usape kwenguva refu.
Saka, kwenguva pfupi, Google inopa mwedzi mina yemahara YouTube Tsvuku uye Google Play Music sevhisi. Nekudaro, pane zvimwe zvisingakwanisike izvo zvingangodaro zvisiri zvekuda kwako. Kutanga wabvisa, iwe unogona kutora chibvumirano kana iwe & apos; watove mubhadharo weimwe yeaya maviri masevhisi.
Kechipiri, kana iwe wakamboregerera chibvumirano ichi kare, saka haugone kuzviita futi izvozvi, saka usachiyedze sezvo chisina kuzoshanda. Panogona kunge paine mamiriro echitatu aunofanira kusangana usati wawana wega iwo mana emwedzi emahara: chibvumirano hachiratidzike kunge chiripo pasi rese.
Ramba uchifunga kuti kana iwe & apos; wakambodzikinura a mwedzi miviri Google Play Music chibvumirano zvisati zvaitika, unogona kuve unokodzera ino inopa mwedzi mina yebasa remahara sezvo iwo akasiyana madhiri. Izvo zvinoenda kune YouTube Red sevhisi yebasa, sezviri pachena.
samsung s10 inoratidza bhatiri muzana
Inorova Solo Pro isina waya mahedhifoni ari kutengeserana paWalmart nhasi; Zvirinani kurumidza
Kuendesa data kuPixel yako nyowani kuchaita kuti uve wakadzikama uye wakasununguka unoti Google (VIDEO)
Verizon & apos; s mhinduro kuT-Mobile & apos; yakakura 5G kuwedzera iri ... haishamise kwazvo